Shiinaha dixiriga dixiri Shiinaha | qeybiyeyaasha gearboxka dirxi Shiinaha | soosaarayaasha dirxiga sameeyaha ee Shiinaha
Shiinaha dixiriga dixiri Shiinaha | qeybiyeyaasha gearboxka dirxi Shiinaha | soosaarayaasha gearboxka dirxi ee Shiinaha
XL sanduuqa qalabka dixiriga shaqeeya awood dureer weyn - laba illaa saddex jeer ayaa ka kordhay geerka dixiriga caadiga ah. Sida horudhac ahaan worm gearbox soo saarayaasha shiinaha, XL waxay soo bandhigtay seddex qalab oo muhiim ah: dixiriga laba goor dixiriga goy-yareynta (taxane C), dixiriga dixiriga dixiriga (taxanaha NMRV) iyo qalab dixirigoodu labalaabmayo.
Sanduuq kasta oo dirxi ah oo ka mid ah XL-ka waxaa lagu hagaajiyaa waajibaadka culus iyo codsiyada miisaanka culus. Sidoo kale, waxtarka gudbintoodu waa 5 ilaa 10% ka kordhay sanduuqyada kale ee dixirigoodu.
Qalab dixirigoodu waa qaab loo yaqaan 'gear gear gear' oo hubaal loo shaqeysiiyo si loogu beddelo soo-gelinta xawaaraha mootada waxsoosaarka hoos u dhigidda wax-soo-saarka xawaaraha iyadoo weliba la ilaalinayo xuddunta waaweyn. Soo-saaraha dixirku wuxuu ka kooban yahay marsho ku dhex jira nooca mashiinka lagu dhejiyo mashiinka kaas oo soo baxa inta lagu jiro jihada saxda ah. Geerka dixiriga ah waxaa marka hore laga soo saaray naxaas leh bir ama dixirigoodu ka samaysan yahay bir bir ah. Cabirka ka soo baxa dixiri dixirigu waa mid aad u xishood badan oo jilicsan marka la barbar dhigo qalabka kale ee wax yareeya oo yareeya kaas oo ka caawiya inay ka caawiso waxqabadka xawaaraha mootada iyo dhibaatooyinka aagga.
Miyuu isticmaalaa Worm Gearbox?
Sanduuqyada dirxi-dixiriga waxaa loo adeegsadaa meelaha sida qalabka wax lagu dhejiyo, wiishashka, wiishashka, suumanka wax lagu raro, alaabada daryeelka caafimaadka, farsamooyinka gudbinta awoodda korantada, iyo irdaha amniga si cinwaan looga dhigo dhowr.
Waa maxay saxanka gear-ka dixiriga ah ee loo isticmaalay?
Qalabka dixiriga (ama dixiriga dixiriga) runtii waa halabuur gaar ah oo loo maro kaas oo fur (dixir) ku xoqdo qalabka / giraangirta sida qalabka gawaarida. Dejintu waxay u oggolaaneysaa isticmaaleha inuu ogaado xawaaraha wareega iyo marka lagu daro wuxuu u oggolaanayaa isugeyn sare inuu noqdo mid la kala qaado.
Sidee dirxi dixiriga shaqada u qabtaa?
Sidee Gooryaanka Gears Function. Mashiinka korantada ama mishiinka ayaa adeegsanaya awoodda wareejinta iyada oo loo marayo dixiriga. Dixirigoodu wuxuu ku wareegayaa giraangirta, wejiga wareejiyana wuxuu ku riixayaa ilkaha giraangirta dhexdeeda. Giraangiraha waxaa loo riixayaa dhinaca culeyska.
Qalab dixirigoodu miyuu mari karaa tilmaamo kasta?
Wadayaasha dixiriga ah ayaa mari kara labada waddo midkoodna, laakiin waa in loo sameeyaa iyada. Sidaad u sawiri karto, u rogaya geedka dixiriga xamuulka hoostiisa ayaa abuuri doonta riix dhinaca fiiqan ee fur. Dhinaca kale, haddii aad ka weecato dariiqa jihada riixintu sidoo kale way rogi doontaa.
Sideed uga soo gudubtaa saamiga maaddada geedka dixiriga ah?
Tirada Mawjadaha Gooryaanka
Tirada dunta ku jirta dixiriga ayaa ah tirada ilkaha ku jira dixiriga. Saamiga gudbinta xawaaraha ee goroolka dixiriga ah iyo gogosha dixiriga waxaa lagu helaa iyadoo loo qaybinayo tirada ilkaha ee dixiriga dixirka iyadoo loo marayo inta dunta leh dixiriga ah.